विरोधिहरुसंग यस्तो बदला लिनुहोस्, ता कि, उनिहरु सदैव आभारि बनुन् - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
विरोधिहरुसंग यस्तो बदला लिनुहोस्, ता कि, उनिहरु सदैव आभारि बनुन्
प्रकाशित मिति: ७ जेष्ठ २०७७, बुधबार May 20, 2020
शत्रुसँगको मित्रता नै शत्रुताको अन्त्य
मोतीझैं टल्कन्छ, फूलका खातमा शीत बनेर पानीको बुँद । कालो धब्बा पनि सुहाउँदो आभूषण बन्छ, चन्द्रमाको सौन्दर्यमा । यो सबै सङ्गतगुनाकै फल त हो । जस्तो सङ्गत, उस्तै रङ्ग । बुद्धको सङ्गतले अङ्गुलीवाला जस्तो हत्यारा पनि सिद्ध पुरुष बन्न सक्छ । हिलोको गन्धले भरिएको तलाउ पनि शोभायमान बन्छ, कमल फुलिदिँदा । राम्रो व्यक्ति, व्यवहार र विचारको स्पर्शले जीवन पनि सुस्वादू बन्न पुग्दछ ।
दूधमा मिसिएको पानी पनि सेतो रङ्गको बन्छ । जीवन पनि पानीका थोपाजस्तै हो । जस्तो रङ्गमा रंग्याउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै रङ्गमा सजिदिन्छ। सजाउने साँचो जो–कसैसँग छ । देख्नुभएको छैन, हरियो बाल्टीमा पानीमा हरित मुस्कान ।
भनिन्छ– सपना देख्ने मानिस कहिल्यै हार्दैनन् । जसले सपना देख्छ, पूरा गर्ने ल्याकत पनि उसैले राख्छ । र त विद्वानहरु सपना देख्न हरबखत उक्साइरहन्छन् । किनभने सपनामा जीवन निहीत हुन्छ । जीवनको गोरेटोमा एक खुट्किला अगाडि बढौँ, अनि अर्को पनि बढाऔँ, फेरि पनि बढाऔँ पाइलाहरू शिखर नचुमेसाँ । थाकेपछि हैन, यात्रा सकेपछि मात्र विश्राम लिऔँ । कहाँ पुगिँदैन र जिन्दगीमा ! पुग्ने ठाउँ तय गरौँ, अठोट गरौँ र यात्रा निरन्तर धकेलिरहौँ ।
अन्धो हँुदाहँुदै होमरले इलियड र ओडिसी जस्ता महाकाव्य लेखे । कुँजो स्टिफन हकिङसले ब्ल्याक होलको रहस्य खोतले । गरिबीले थिचिएका मोजर्ट संसारकै विख्यात सङ्गीतकार बने । थर्ड डिभिजनमा एसएलसी पास गरेका महात्मा गान्धी विश्वले शिर झुकाउने बने। मन्दबुद्धिको भनिएका अल्बर्ट आइन्स्टाइन संसारकै ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक बने । दाउरेका छोरा अब्राहम लिंकन अमेरिकाको राष्ट्रपति बने । घरेलु नोकर म्याक्सिम गोर्की महान् लेखकको कोटीमा दरिए । पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने धिरुभाइ अम्बानी भारतकै धनाढ्य बने । खुट्टैले लेखेरै झमक घिमिरेले मदन पुरस्कार हात पारिन् ।
निरन्तर यात्रा र महान् सङ्कल्पले मानिसलाई उदाहरणीय बनाउँछ । यी उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरुको सफलता संयोग होइन । न प्रकृतिको देन नै हो । अभ्यास त्यसको एकमात्र कारण हो ।
जसरी सूर्यमा प्रकाश छ, त्यसैगरी तपाईंभित्र पनि महापुरूष छ । आफूभित्र महापुरूष जगाएको दिन, तपाईंलाई दुनियाँकै नामी व्यक्ति बनाउन कसैले रोक्न सक्दैन । सिवाय, आलस्य–जुम्सो र अल्छ्याइँ ।
अतः विस्फोट गर्नूहोस् क्षमतालाई, भत्काउनुहोस् आफँैभित्रका आलस्यका आफूभन्दा अग्ला पर्खालहरुलाई । सुत्ने कोठाका भित्तामा सङ्कल्पलाई वेदका ऋचा बनाएर टाँस्नूहोस् । उज्यालो नहुँदै प्रत्येक दिन कसम खानूहोस्– एक दिन मैले पूरा गरेको त्यो सङ्कल्प लाखौँका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ ।
मान्छेसँगभन्दा किताबसँगको सङ्गत दसौँगुणा हितकर हुन्छ । जसरी उखुले निचोरिँदा पनि गुलियो नै दिन्छ, किताको गुन पनि त्योभन्दा भिन्न हुँदैन, च्याते पनि गुनै दिन्छ ।
सफलताका पुस्तक, सकारात्मक व्यक्तिहरुको भनाइ, प्रेरक आलेखको अध्ययन र मननले जीवनलाई सत्यको पथमा डो¥याउँछन् । योग, ध्यान र चिन्तनले आफूभित्रको विकार र खराबी पन्छाउन मद्दत पु¥याउँछ ।
जन्म संयोग होइन, कुलको धर्म र पूर्वजन्मको योग हो । भनिन्छ– हरेक जन्मको खास कारण हुन्छ । तपाईंको अस्तित्व यो धर्तीमा रहनुको पनि कारण छ । कारणको खोजी अहिल्यै गर्नूहोस् । र, जन्मको सार्थकतातर्फ पाइला चाल्नूहोस् ।
जसरी जन्मदिनको शुभकामना, अघिल्लो दिन वा भोलिपल्ट दिँदा अर्थहीन हुन्छ, त्यस्तै तपाईंको शरीरलाई समयको बहावले मक्काउन नपाउँदै आजै महान् गन्तव्य तय गर्नूहोस् । जीवनका दुई दिनहरु महत्वपूर्ण हुन्छन्, ती हुन् जन्मेको दिन र अर्को जन्मको कारण थाहा पाएको दिन । पहिलो महत्वपूर्ण दिन त तपाईंले थाहा पाइसक्नु भयो, अब दोस्रो महत्वपूर्ण दिनको खोजमा लाग्नूहोस् । आफूभित्र निहित क्षमतालाई लोककल्याणका लागि समर्पण गर्न सक्नु नै जीवनको सार्थकता हो । यदी सूर्यले प्रकाश आफैँमा सीमित गरेको भए संसार अन्धकार हुन्थ्यो । ब्रह्माण्डले उसको जयजयकार शायदै गर्थे । वासिङटन इर्भिनले भनेका छन्– “महान् मान्छेहरु अठोट र सङ्कल्प गर्छन् र सामान्य मान्छेहरु केवल कामना राख्छन् ।” तपाईंको हरेक जन्मदिन नयाँ सङ्कल्पका साथ जीवनलाई ऊर्जा दिँदै बेहोसीबाट ब्युझिँने मुहूर्त बन्न सक्नुपर्छ, न कि नशा पिएर बेहोसमा मातिने बहानाको दिन बन्नु हुन्न । अरुको जन्मदिनको निम्तो मान्न गएको दिन, आफ्नो जीवनको सङ्कल्पको कति पूरा भो, अब त एक–एक गरेर धर्तीमा रहने दिन छोटिँदै छ भनेर झट्का लाग्ने दिन बन्नुपर्छ ।
सारा गिरी खुसीमा भन्छिन् –“पानीको बीचमा तेलको थोपाझैं जीवन बिताउँनुपर्छ । सांसारिक डुब्दाडुब्दै पनि त्यसबाट अलग रहेर बाँच्न सिक्नुपर्छ । जस्तो परिस्थिति आउँछ हामी बगिरहनुपर्छ, पानी जस्तै । ताल, खहरे र नदी बनेर । समुद्र भेटियोस् वा नभेटियोस् यात्रा रोकिनु हुन्न । लामो जीवन हुनै पर्छ भन्ने हैन, धेरै जन्मदिन मनाइरहनै पर्छ भन्ने छैन, बरु थोरै दिनको भए पनि महान् जीवन बाँचौँ ।”
दलाई लामाले भनेका छन्– “प्रसन्न रहनु नै जीवनको लक्ष्य हो ।” यस्तै प्रसन्नताको बीचबाटै एक महान् जीवनको सूत्रपात गर्न सकिन्छ । जीवनको अर्थ भेट्नु भएन भने सधैँ सूर्यलाई हेर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस् उसको अगुवाइलाई । तपाईं प्रशंसक बन्नुहोस् त्यो प्रकृतिको राजाको । तपाईं पनि प्रेरणा लिनुहोस् सूर्यबाट र प्रकाश छर्नुहोस् जीवनको कुनै एक कल्याणकारी क्षेत्र चुनेर । सूर्यबाट प्रेरणा लिन सक्नु भएन भने रुखलाई हेर्नुस्, प्रेरणा लिनुहोस् त्यसबाट, जीवनका चरम गर्मी, काठ्याङ्ग्रिदो जाडो, आँधी र हुरीमा पनि कठिबद्ध उभिएर, संसारलाई झरीमा ओत र गर्मीमा छाया दिरहने छु भनेर । रुखबाट पनि प्रेरणा मिल्न नसके फूललाई हेर्नुहोस्, छोटो जीवन बाँचे पनि काँडा बीच, मुस्कुराउँदै सुवास छरिरहने छु । प्रेरणा लिन टाढा पुग्नै पर्दैन । हिन्दीमा उखान छ, ‘मन चङ्गा त लोटा मे गंगा ।’
अक्सर सुन्ने गरिन्छ– मेरो खुटा तान्नेहरुले प्रगति गर्नै दिएनन् ! प्रतिस्पर्धा कहाँ छैन ? यदि अर्को शुक्रकिटले उछिनेको भए, शायदै तपाईंको जन्म हुन्थ्यो । अतः प्रगतिको बाधक अरुलाई देख्नु जीवनमा आफैँले आफैँलाई आश्वासन दिनु मात्र हो । हेर्नूहोस् न, मलपानी नदिए पनि चोकचौताराका बोटविरूवाले तपाईंहामीलाई शीतल छहारी दिएकै छन् नि !
स्व. पिताश्री शिवप्रसाद सापकोटाज्यू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– “दशैं, वा कुनै पर्व पारेर शत्रुकोमा आशीर्वाद थाप्न जानू । उसले दिएको राम्रो आशिष्ले तपाईंलाई अविराम विजयतर्फ डोहो¥याउँछ ।” तपाईंलाई निकै रिस उठेको व्यक्ति छ भने उसको जन्मदिनमा भलिभाँती शुभकामना पठाउनूहोस् । यसबाट उसलाई मित्र बन्न करै लाग्छ । क्षमा दिनुहोस् उसैको जन्मदिन पारेर । क्षमादान वीरहरुको गुण हो । अब्राहम लिङ्कन भन्छन्– “म शत्रुलाई सखाप पार्न शत्रुता गर्नेसँग मित्रता गाँस्छु ।”
अतः जीवनमा दुश्मन हैन, दुश्मनी मेटाऔँ । प्रेम मौलाउँदै जान्छ, घृणा सङ्कुचित बनेर आफैँ नामेट हुन्छ । जीवन धन्य बनाउन राम्रो सङ्गत, महान् सङ्कल्प, प्रेम र सात्विकताको बाटो रोजौँ । यी शब्दहरु पढ्दै गर्दा, एकैछिन आखा चिम्लेर सङ्कल्प गरिहाल्नूहोस्– म पनि अरु जत्तिकै महत्वपूर्ण मानिस हुँ । मसँग मेरो आफ्नै विचार, भावना तथा मूल्य–मान्यताहरु छन् । मसँग धेरै राम्रा गुणहरु छन्, जुन मैले मेरो र अरुको भलाइका लागि प्रयोग गर्न सक्छु साथसाथै मसँग एउटा राम्रो र छुट्टै व्यक्तित्व छ । म बाँचेको सुन्दर दिन, भोलिको पुस्ताले प्रेरणाका लागि खोजेर पढ्नै पर्ने जीवन बन्ने छ ।
।। ॐ भवतु सब्ब मङ्गलम् ।।
(यो लेख ‘सुखसूत्र’ कृतिबाट सभार गरिएको हो ।यो पुस्तक खरिद गर्न ,प्रतिकृया दिन यसमा E:bhimsensap@gmail.com, +9779841345200(Nepal),+61434570379 (Australia)संपर्क गर्न सकिने छ । ‘सुखसूत्र’बाट प्रेरित बन्न अडिओ र भिडियोमा सुन्न तलको लिङ्क पछ्याउंनुहोस्।)
आमा र ‘बा’हरु मृत्‍युले कहिल्यै मर्दैनन् !
आमा र 'बा'हरु मृत्‍युले कहिल्यै मर्दैनन् ! तिमीले चुसाएको छात्तिको सिर्का […]
गीत याद यति किन आउँथ्यो, माया […]
परास्त लोभ ! (कथा)
परास्त लोभ ! (कथा) ~आचार्य राजन शर्मा (भीमसेन सापकोटा ), सिड्नी , अस्ट्रेलिया […]
। । जीवनलाई सजाउंन सक्नु पर्छ । ।
। । जीवनलाई सजाउंन सक्नु पर्छ । । जुटौं, योग र शान्ति प्रेमि ,एउटै भाव जनाउं । शान्ति र बुद्द […]
‘मृत्‍युको उत्सव ‘
'मृत्‍युको उत्सव ' जे का लागि जन्मिएका हौं , त्यसैका लागि भएनौं भने , जहाँ पुग्नु थियो त्यता […]
“प्राकृतिक उपायद्वारा मात्र तनावलाई निर्मुल पार्न सकिन्छ” : आचार्य राजन शर्मा
असनेपाल न्युज । त्रसित हुनु, चिन्ता लाग्नु, निन्द्रा नलाग्नु आत्तिनु, गाह्रो परिस्थितिहरुमा स्थिर हुुनसक्नु […]
नेपालमा थप ५ सय २५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
टिचिङ अस्पतालका दुई चिकित्सकमा कोरोना संक्रमण, आकस्मिक कक्ष सिल
बुक बिल्डिङ विधि लागू, संगठित संस्थाले अब बोल कबोलमार्फत आईपीओ जारी गर्ने
भारतमा एकैदिन थपिए ६७ हजार बढी कोरोना संक्रमित